Ukuthumela kwelinye ilizwe-iYuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Ifayibha zeJERA zibonelela ngeemveliso ezisemgangathweni ophezulu kunye nenkonzo ebalaseleyo kubathengi.
Oko sikukhathaleleyo ayisiyiyo kuphela umgangatho weemveliso, kodwa kunye nemeko yeemveliso emva kokuhambisa kunye nokuhambisa ngesandla kwe-3. Ingakumbi ukuthunyelwa kwe-LCL, kunokubakho ukuthuthwa okuninzi ngaphambi kokuba iimpahla zifike kwindawo ekuyiwa kuyo, kwaye inkqubo yethu yokupakisha yangaphakathi iyakwazi ukuqinisekisa ukuba iphakheji yomelele ngokwaneleyo ukuthintela nayiphi na into eyonakalisayo ngexesha lokuhamba.
Siza kubanceda abathengi bethu ukuba bafumane ezona ndlela zilungileyo nezifanelekileyo zokupakisha ngexesha lothethathethwano lweodolo yokuthenga, eya kuthi ibancede bagcine iindleko zabo.
Ngokwesiqhelo sinikezela abathengi bethu ngezi ndlela zokupakisha zilandelayo:
1.umgangatho ophezulu weCarton. Le ndlela yephakheji ihlala isebenza ekupakisheni iimveliso ezinobunzima obufana nefayibha ye-fiber optic, ukulahla intambo ye-cable, iibhokisi zokuhambisa i-fiber optic njl.
2.Umgangatho ophezulu weCarton kunye ne-poly bag. Le ndlela yephakheji ihlala isebenza ekupakisheni iimveliso ezinzima ezinje ngeebhendi zentsimbi, iibhakethi zentsimbi engenasici, amandla ombane aphakathi kunye nezincedisi zevolthi ephezulu, ibhawodi yentsimbi okanye izibiyeli.
Iipelethi ezenziwe ngomthi ezenziwe ngokwezifiso. Abanye abathengi bacela iipelethi ukuba bahambise imithwalo yabo xa besenza i-LCL okanye i-FCL. Le ndlela yephakeji isebenza ekupakisheni iimveliso zokukhanya ezinje ngevolthi ephantsi yeABC izixhobo, izixhobo zokugquma ezigqunyiweyo, ii-lugs zekhebula, izixhobo ze-FTTH zentambo njl.
4.Iibhokisi zeenkuni. Ukufaka isicelo sokuphosa isinyithi esinzima okanye izixhobo zokubopha. Ezifana nesocket eye, clevis, ball eye eye grips etc.
Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi ngolwazi oluthe kratya! Uya kufumana uluhlu lokukhuphisana lweemveliso ze-FTTX ngomgangatho ophezulu, ukuhanjiswa okukhawulezayo kunye nenkonzo egqwesileyo evela eJera.